Dynamics Indostria |
Miatrika ny fitaovana fitsaboana any Chine ...
Mijoro eo amin'ny sampanan-tantara eo amin'ny tanjona "zato taona", miatrika toe-javatra vaovao ny indostrian'ny fitaovam-pitsaboana sinoa sy ny fizotran'ny lalàna mifehy. Wang Zhexiong, talen'ny sampan-draharaha misahana ny fanaraha-maso ara-pahasalamana ao amin'ny fanjakana, dia nilaza fa tamin'ny 2021, tao ...
Ny fangatahana sy ny zava-misy amin'ny toerana diso
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-16
Miaraka amin'ny fanatsarana ny fivoarana ara-tsosialy sy ara-toekarena dia mihamaro hatrany ireo zokiolona maniry ny hanatsara ny kalitaon'ny fiainany amin'ny fahanterany. Saingy, ny indostrian'ny serivisy fahanterana dia taraiky aoriana amin'ny filàn'ny zokiolona manokana. Ny ankamaroan'ny toeram-pitsaboana fahanterana ao Chin ...
Ny fandriana mpampinono mandeha amin'ny herinaratra dia afaka mamaly ny filan'ny ...
Amin'izao fotoana izao, ny marika palitao landihazo vita amin'ny landihazo dia namokatra fandriana mpampinono herinaratra fehezin'ny feo sy fandriana mpitsabo mpanampy maso. Mety kokoa ny mampiasa ilay rangahy antitra eo am-pandriana, na dia tsy azon'ny remote control ampiasaina hifehezana ny asan'ny fandriana aza ny tanana amin'ny alàlan'ny firesahana sy ny fijerin'ny masonao ....
Atsimbadika ny fandriana fitaizana be antitra - ny cho ...
Ny fomba hikarakarana araka ny tokony ho izy ireo zokiolona sembana ao amin'ny fianakaviana no olana miteraka olana lehibe indrindra ho an'ireo zanaky ny asa sy ny fianakaviana. Ny hafainganam-pandehan'ny fiainana dia miha haingana dia haingana, ary mihombo ny tsindry ataon'ny fiainana. Betsaka ny olona miahy ny fahaverezan'ny angovo ao amin'ny fianakaviana. Amin'ity fifaninanana sosialy ...
Farafara vaovao ny fandriana fikarakarana zokiolona manan-tsaina ...
Ny fomba fisotroan-dronono mahazatra dia tsy dia ampy loatra hanatrarana ny firongan'ny fahanterana ao Shina, ary ny olana amin'ny fisotroan-dronono dia mitady fahombiazana. Miaraka amin'ny fampiroboroboana mitohy ny Internet miampy ny fitomboan'ny indostrian'ny fisotroan-dronono koa dia nanolotra làlana fampandrosoana vaovao, ny econ volafotsy ...
Fandriana fitaizana be antitra ho fanampiana ny ...
(1) ny fomba hiarovana ny fiarovana ny zokiolona mandritra ny fipetrahana. Betsaka ny antitra no mijanona eo am-pandriana mandritra ny fotoana maharitra, ka mahatonga ny vatana tsy hanana tanjaka. Amin'ny fizotry ny fipetrahana, ny vatana dia tsy afaka mipetraka eo amin'ny sisin'ny vatana, ary amin'ny fizotran'ny fipetrahana dia mora midina ny vatan'ilay antitra iray ...
Ny fahendrena ho an'ny be taona dia fironana tsy azo ihodivirana
Amin'izao fotoana izao, ny isan'ny mponina any Chine mihoatra ny 65 taona dia mitentina 8,5% amin'ny totalin'ny mponina, ary antenaina hanakaiky ny 11,7% amin'ny taona 2020, hahatratra 170 tapitrisa. Ny isan'ireo zokiolona monina irery ihany koa dia hipoaka ao anatin'ny 10 taona ho avy. Miaraka amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny olona ...